Nhau - Iyi nyowani polymerization nzira inovhura musuwo kune inoshanda zvakanyanya antifouling kupfeka
Iyi nyowani polymerization nzira inovhura musuwo kune inoshanda zvakanyanya antifouling kupfeka
Kuunganidzwa kwemakemikari pamusoro pechinetso kune ese ari maviri kutumira uye biomedical maindasitiri.Mamwe anozivikanwa anopesana-nekusvibisa mapolymer emachira anopinda mukushatiswa kwei oxidative mumvura yegungwa, zvichivaita kuti zvisashande nekufamba kwenguva. Amphoteric ion (mamorekuru ane zvakaipa uye zvakanaka mhosva uye mambure kuchaja of zero) kuputira kwepolymer, kwakafanana nemakapeti ane macheni epolymer, kwakwezva kutariswa senge dzimwe nzira, asi parizvino inofanirwa kurimwa munzvimbo isina mvura kana mvura kana mweya Izvi zvinovatadzisa kunyorera kunzvimbo huru.
Chikwata chinotungamirwa naSatyasan Karjana kuA * STAR Institute yeChemical uye Injiniya Sayenzi chakawana nzira yekugadzirira amphoteric polymer kupfeka mumvura, tembiricha yemukamuri nemhepo, izvo zvinovagonesa kuti vashandiswe pamwero wakakura kwazvo.
Jana anotsanangura, "Kwaive kutsvaga kwakanyanyisa." Chikwata chake chaiedza kugadzira machira epolymoni achishandisa nzira inoshandiswa zvakanyanya inonzi atom transfer radical polymerization, pavakaona kuti kumwe kuita hakuna kuburitsa chigadzirwa chaidiwa. Amine yakawanikwa isingatarisirwi kupera kweketani yepolymer sechinhu chinoshandiswa pakuita izvi. ”Zvichatora nguva uye nhevedzano yekuyedza kufumura chakavanzika [chekuti chakasvika sei ipapo],” anotsanangura Jana.
Kinetic kucherechedza, nyukireya magnetic resonance spectroscopy (NMR) uye kumwe kuongorora kunoratidza kuti amines anotanga polymerization kuburikidza nemaonion michina. Aya anonzi anionic polymerizations haapikisane nemvura, methanol, kana mweya, asi mapolymer aJana akakura pamberi pevatatu, zvichitungamira timu kusahadzika zvavakawana.Vakatendeukira kumakomputa mamodheru kuti vaone kuti chii chaiitika.
"Density inoshanda dzidziso kuverenga kuverenga kunosimbisa anionic polymerization mashandiro," akadaro. "Uyu ndiwo muenzaniso wekutanga weanionic solution polymerization ye ethylene monomers mune aqueous svikiro pasi pemamiriro ekunze eerobic mamiriro."
Chikwata chake chave kushandisa nzira iyi kugadzira zvipfeko zvepolymer kubva kumamoni mana eamphoteric uye akati wandei evatangi veanionic, mamwe acho asiri amini. "Mune ramangwana, isu tichashandisa nzira iyi kugadzira biofilt-resistant polymer materu munzvimbo huru dzepamusoro. vachishandisa nzira yekupfira kana yekubatira, "anodaro Jana. Ivo zvakare vanoronga kudzidza nezve antifouling mhedzisiro yekupfeka muMarine uye biomedical application.
Post nguva: Mar-18-2021